Trip Yurub: Maxaad Dalxiiska Qaado Tareenadu Oo Aan diyaaradaha | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Trip Yurub: Maxaad Dalxiiska Qaado Tareenadu Oo Aan diyaaradaha
Maxaa ka fiican in ay qaataan xagaaga aad badan socdaalo Europe, xaq u? Right. Ma aha in aad si bankiga u jabin si aad u aragto qaar ka mid ah caasimadaha Europe qurux badan; rumaysanina ama ma, laakiin mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee aad kharash-ool ah safarka Europe waxaa dooranaya tareen halkii diyaaradaha for dalal aad.
halkan waxaa ku qoran 5 sababaha uu doortay tareenada halkii diyaaradaha kaa caawin doona inaad la kulanto Europe in sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah.
Ma fikirka ma lagu siri in London-Paris tareenada Eurostar iyo France TGV Waa xaggee marinnada kaliya-xadiidka xawaaraha sare ee Yurub - waayo, labaatankii sano ee la soo dhaafay, guys, kuwaas oo lagu soo koraya wadooyinka-xawaaraha sare oo dhan qaaradda, qayb kordhinta dalxiiska tareenka iyo in la hubiyo tareen halkii diyaaradaha is gaaray sida xulashada safarka aasaasiga ah. celcelis, tareenada-xawaaraha sare ee safarka Europe 125 si ay u 200 mph, taas oo ku xidhan saldhigyada wadada iyo tareenka waxaa fabulously Haydadda.
Oo tababartay Halkii diyaarado sida Xulashada si dhakhso ah
xitaa ay noqon karaan si ka dhaqso badan duulaya, gaar ahaan safarada muddo ka badan oo ku saabsan 600 miles. Sidee si? Marka aad xisaabiso in waqtiga aad ku bixiso driving garoonka, ka dibna waxaa jira helitaanka hore (iyo inta badan qarash badan 2 saac ka hor cararkiinnu), iyo jeegaga ammaanka adkeeyay, aad xaqiiqsato waxa fudud in la wado saldhiga tareenka bartamaha magaalada iyo guddiga 5 daqiiqo ka hor tareenku ka baxay idaacadda.
Amsterdam si Tareenadu Lille
Waxaad Bixi yar Waayo Service qarsoodiga Top-Notch a Badan a First-Class Diyaarad Ticket
Xataa marka aad safarka ku tareenada ugu raaxo, waxaad heli doontaa sida qiimaha cadaalad ah. Waxaad la yaabi doonaa sababta aad u lahaa la iska ilaaliyo safarka tareenka ka hor! Tusaale ahaan, waxaad bixin doontaa lacag dhan £ 880 qofkiiba laba maalin / hal safar habeenkii la Japan ayaa Toddoba Stars a, oo wuxuu ku raaxaysan muuqaalkii xaqse ee jasiiradda Koonfurta Japanese ah Kyushu sida aad u safarto; lid ku ah qiimaha in, tigidhka diyaaradda ka London in Tokyo aad ku kici doona ku dhawaad ​​£ 5,000 iyadoo British Airways. Woah! Waxaan leedahay dareen aad doonaa doorashada tareen halkii diyaaradaha hadda ka, miyaydaan?
Shandadaha laga badiyay yahay (shiidaa) Kahdo Of marka la barbar Tareenadu Halkii diyaaradaha
boorsooyinka laga badiyay waa wax ka mid ah wax hore u, ugu yaraan marka ay timaado long-distance safarka diyaarada. Lid ku ah in, saldhigyada tareenada iyo tareenada ma lumin bacaha rakaab sida rakaab ah oo keliya waa kuwa walwalo ay boorsooyinka u gaar ah. Sidoo kale waxaad keeni kartaa intii aad qaadi karaan, ka duwan diyaarado in ay leeyihiin cad boorsooyinka xadeynta.
Tani waa sababta ugu fiican in la isticmaalo tareen halkii diyaaradaha.
Salzburg in Tareenadu Berlin
Waxaad ka boodi kartaa Jahannamo ee Security Airport
Marka ay timaado in ammaanka, doorashada tareen halkii diyaarado u muuqataa sida doorasho macquul ah, oo hadda aad arki doonaa sababta. waayo-aragnimo ammaanka garoonka diyaaradaha ayaa asal ahaan waa taxane ah oo xaaladaha xun. Aad bilowdo si degdeg ah dhidid ka hor inta aanad gelin jeeg ammaanka inkastoo aad ogtahay aadan samayn ama wax sharci darro ah la timid. Oo, ha ilaawin codsiyada xun in meesha laga saaro aad suunka, Siib Kabahaaga Adigu iyo whatnot, ka dibna waxaa lagu taabtay hoos by nin maagaalada Muqdisho. Tareenadu aadan haysan this - iyo in shaabadood badan heshiiska.
browse in ay Save-A-tareenka inay jartaan kortaan tareen halka aad ugu jeceshahay, iyo heerka ugu jaban! Illooba oo dhan ku saabsan kharashka jaale qaataan nidaamka jaale 3-daqiiqadii fudud online iyo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-trip-trains-planes%2F%0A%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#diyaarad #railtravel diyaarad planetravel tareenka tareen safarka